China 900KG, Magnet Box 1Ton ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy latabatra mihintsy mialoha ny fametahana latabatra | Meiko Magnetics
900KG, Magnet Box 1Ton ho an'ny fanamboarana ny latabatra fametahana latabatra mialoha
900KG Magnetic Shuttering Box dia rafitra manerantany malaza ho an'ny famokarana rindrina tontonana mialoha, samy bobongolo amin'ny lafiny hazo sy vy, mifangaro amin'ny baoritra boaty karbonika sy rafitra neodymium andriamby.
Magnet Box 900KG dia haben'ny boaty andriamby mahazatra ho an'ny fananganana formwork mialoha, na ny bobongolo amin'ny lafiny hazo na vy, mifangaro amin'ny akorandriaka boaty ary andiana rafitra neodymium an-tany tsy fahita firy.
Azo alefa amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny ny bokotra amin'ny tanana na amin'ny tongotra. Mba hamonoana azy ireo dia avoaka mora foana ny andriamby amin'ny alàlan'ny vy (hametahana ny bokotra). Amin'ny toerana tsy miasa dia azo esorina mora foana avy eo amin'ny endrika latabatra ny andriamby manidy. Ireo andriamby simenitra mialoha dia azo ampiasaina irery na mifandray amin'ny adpator hanamboarana ny formwork. Mazava ho azy fa 900Kg andriamby boaty hery mitsangana dia mety tsara amin'ny famokarana tontonana 60-90mm.
Teo aloha: 450KG Magnet Box misy bokotra Push-pull
Manaraka: 1350KG, 1500KG Karazan-rafitra rafitra manamboatra andriamby
Magnet Box 1000KG
1Ton Box Magnet Capacity
Magnet Box 900KG
Magnetsen'ny bokotra 900KG
900KG Magnet Concrete
Matoanteny mamono 900Kg